घरका सबैले हेला गरेकी भाइरल साइकल वालीले सित्तैमा बस्ने घर पाउदा धेरै खुशी बनिन् ! हेर्नू होस भिडियो:: Mero Desh
घरका सबैले हेला गरेकी भाइरल साइकल वालीले सित्तैमा बस्ने घर पाउदा धेरै खुशी बनिन् ! हेर्नू होस भिडियो
Published on: १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १२:०८
पछिल्लो समय साइकल वाली सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भएकी छिन! उनी बिबाहित भएको घर बाट धेरै अपहेलित भए ! पछि केही गर्न र कमाउनको लागि काठमाडौ आएकी उनी धेरै संघर्ष गरेकी बताउछिन! उनले ज्यामी काम देखि अहिले सेक्युरिटी गार्ड गर्दै छिन!भिडियो
उनले साइकलमा यात्रा गर्दै सेक्युरिटी को ड्रेस मा देखिए पछि धेरै मिडियामा देखेकी उनी अहिले काठमाडौ बसो बास गर्नु हुने एक जना मनकारी घर बेटिले आफै फोन गरेर उनलाई मिडियाको मार्फत बोलाउनु भयो! र साइकल वालीको दु:खद बुझेर घरबेटिले बसुनजेल सित्तैमा कोठा दिनु भएको छ !
यो पनि:रामेछापकि मीरा खत्री कार्की यतिबेला बानेश्वरको एटीएम लन्जमा सेक्युरिटीको काम गर्दै आइरहनुभएको छ । उनी साइकलमा करिब एक घण्टा हिँडेर त्यहाँ पुग्न गर्छिन्। साइकल किन्नुभन्दा अगाडि उनी दुई घण्टा हिँडेर पुग्ने गर्दथिन्। उनी यतिबेला काठमाडौमा एक्लै बस्दै आइरहेकी छिन्। उनको बच्चाहरू, श्रीमान र सासूससुरा पनि हुनुहुन्छ। श्रीमान चाहिँ ड्राइभर हुनुहुन्छ।
उनको र श्रीमानको खटपट भएपछि एक अर्कामा अलग बस्दै आइरहेकी उनी सुरुमा आफ्नो बच्चा लिएर काठमाडौ आइन् र घर बनाउने ठाउँमा ज्यामी काम गर्न थालिन् तर बच्चालाई पनि संगसंगै लैजानु पर्ने र बच्चाले पनि जथा भावी ढुङ्गा माटो खेलाउने,खाने भएकोले संगै राख्ननमिलेर घरमै लगेर राखेकी थिइन्।घरमा पनि सासू आमाको रात दिन कचकचले गर्दा उनी त्यहाँ पनि बस्न नसकी फेरि काठमाडौ आएर बसेकी थिइन्।
काठमाडौमा बस्दै गर्दा घरबेटीले भाडामा सारै नै किचकिच गर्ने भएर पहिले बस्दै आएको घर छाडेर अर्को घरमा सरेकी छिन्।एकजना दाइले लगाइदिनुभएको सेकुरिटीको जागिर त्यसमा पनि जम्मा ११ हजार मात्रै हुन्छ। त्यसमा पनि ४ हजार त दिनैपर्छ र बाँकि ५ हजारमा सबै गुजारा चलाउनुपर्ने हुन्छ। घरमा जाँदा पनि सासूले तथानाम गाली गरेर बस्न नसक्ने बनाएको उनले बताएकी छिन्।